सुपथ मूल्य पसलको सरकारी नाटक कहिलेसम्म ?
सरकारले गएको असोज १२ गतेदेखि नेपालीहरुका चार्डपर्व दशैं, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै राजधानी र उपत्यकाबाहिर सर्वसाधारणका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ । यस्ता पसलहरुमा दैनिक उपभोग्य सामानहरु छुटमा पाइने सरकारले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र टेकु, थापाथली, बल्खु, जडीबुटी, रामशाहपथ, नयाँ बानेश्वर, कालिमाटी, सतुंगल, बौद्ध, बूढानिलकण्ठलगायत २३ ठाउँमा यस्ता पसलहरु सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसैगरी उपत्यका बाहिर विर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौंडा, पोखरा, वाग्लुङ, दाङ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बनेपा र त्रिशुलीलगायत ३६ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसलहरु सञ्चालनमा आएका छन् । असोज १२ गतेदेखि कात्तिक २७ गतेसम्म यस्ता पसलहरु रहने बताइएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थान लगायतसँगको सहकार्यमा सरकारले खोलेको यी पसलबाट सर्वसाधारणले विशेष छुटमा दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । दिइएको छुटअनुसार चिनीमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ, नुन दुई रुपैयाँ, दाल, चामल, घिउलगायतमा १० रुपैयाँ र भटमासको तेल आठ रुपैयाँ प्रतिलिटर छुटमा पाइनेछ । त्यस्तै पनिर पाँच रुपैयाँ र खसी–बोका प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुटमा पाइनेछ । अन्य वस्तुहरुमा ग्यास प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँ छुटमा पाइनेछ भने गेडागुडीमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिइएको छ । बताइएअनुसार ७८ प्रकारका खाद्यवस्तुका साथै ८४ प्रकारका दाल र गेडागुडीमा छुट छ । त्यस्तै ८९ प्रकारका मसला, २४ प्रकारका चामल, तीन प्रकारका घिउ, २३ प्रकारका चिया, १० प्रकारका चाउचाउ, २७ प्रकारका मैदा, आटा, सुजीलगायतका पिठो र विद्युतीय सामानसमेत गरी कुल दुई सय ६० प्रकारका सामान छुटमा राखिएको छ । बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ः३० बजेसम्म पसल खोल्ने समय तोकिएको छ । खुद्रा व्यापार संघसँग पनि छुट दिने विषयमा सम्झौता भइसकेकाले सर्वसाधारणले अन्य खुद्रापसलबाट पनि छुटमा यस्ता सामानहरु पाउन सक्ने सरकारले बताएको छ । यसरी चार्डपर्वलाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणका लागि सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ । महँगीमा पिल्सिएका नागरिकका लागि यो खुसीको कुरा पनि हो ।
अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले डेढ महिना मात्र सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भनेको छ । बाँकी साढे १० महिना महँगीले जनताको ढाड सेक्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिएर महँगी बढाउन अझ प्रश्रय दिने नियतले सरकारले डेढ महिनाको छुट देखाएर जनतालाई झुक्याउँदै त छैन ? डेढ महिनासम्म दिइएको छुटको साँवा व्याजसम्म असुल गर्नेगरी साढे १० महिना मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारले कहिल्यै कारबाही गरेको छ त ? उल्टो महँगोमा भए पनि व्यापारीले सामान उपलब्ध गराएर निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्दै विगतका सरकारी मन्त्रीहरुले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको हो कि होइन ? अनि सर्वसाधारणले के चार्डपर्वमा मात्र सामान किन्छन् ? अरु बेलामा चाहिँ छुट चाहिँदैन ? यति मात्र होइन वर्तमान सरकारले जनतालाई थप महँगी थोपर्ने गरी नौ पटक त इन्धनको मूल्य बढाएको छ । चार्डपर्वको मुखमा भर्खरै पनि सरकारले सवारी साधनको भाडामा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यससँगै बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानहरुको भाउ छोइनसक्नु छ । अझ स्थानीय तहहरुमा मनलाग्दी तरिकाले कर लगाएर सरकारले जनतालाई राहत होइन मूल्यवृद्धिले आहात बनाएको छ ।
यस्तो बेलामा चार्डपर्वलाई लक्षित गरी खोलिएका भनिएका डेढ महिने सुपथमूल्य पसल विगत वर्षहरुमा जस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्र खोलिने देखिएका छन् । यस्ता पसलहरु देशका केही सहरहरुमा मात्र खोलेर बाँकी भेगका नागरिकका लागि चाहिँ सहुलियत चाहिँदैन होला सायद । यसलाई सरकारको नाटकभन्दा अरु के मान्न सकिएला र ? नागरिकले यस्ता सयौं प्रश्नहरु अहिले प्रशासनसामु राखिरहेका छन् । तर जवाफ कतैबाट पनि पाएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले देशभरि ३६ स्थानमा मात्र सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलले कति नागरिकले सेवा पाउन सक्छन् , त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा उपत्यकामा रहेका ५० लाखभन्दा वढी सर्वसाधारणका लागि २३ वटा सहुलियत पसल राख्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । हुन त सरकारले वर्षेनी यस्ता पसलहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर ती पर्याप्त छैनन् र नागरिकलाई सास्ती दिने नियतले मात्र खोलिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । सहुलियत पसलमा सामान किन्न जाने उपभोक्ता टाढाबाट जाने आउने भाडा र लाग्ने समयको हिसाब गर्ने हो भने उल्टो घाटा पर्ने देखिएको छ । यद्यपि पहुँच पुग्ने नागरिकले केही छुटमा भए पनि सामान खरिद गर्न पाउनुलाई भने सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।
गएको पाँच वर्ष यता नेपालमा महँगीले आकाश छोएको छ । सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बरले बढेको मूल्य वृद्धिले दोहोरो अंक मात्र छोएन भान्सा पनि अचम्मले महँगिएको छ ।
केही वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले महँगिएका बजारहरु अहिले पनि उस्तै छन् । सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास त ग-यो तर सफलता भने हासिल गर्न सकेन । अहिले पनि बजारको नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउने सरकारी टोलीले सस्तो प्रचारका लागि मात्र अनुगमन गरेको देखिएको छ । महँगी र कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई फेला पारे पनि कारबाही गर्न भने सकेको छैन । उनीहरुलाई पक्राउ गरी सामान्य सोधपुछमै छोड्ने गरिरहेको सरकारी अनुगमन टोली पनि नाम मात्रको छ । यस्तो अवस्थामा देखावटी सहुलियत पसलको के अर्थ ? सरकारसँग यसको कुनै जवाफ छैन । सरकार चार्डपर्वमा सस्तो पसल सञ्चालनको नाटक गर्छ । उता व्यापारीहरु चार्डपर्वकै बहानामा भारी छुटको लोभ देखाउँदै सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । सरकारले दाल चामलमा सामान्य छुट दिने भने पनि चार्डपर्वमै धेरै खपत हुने कपडाजन्य वस्तुमा कुनै सहुलियत तोकेको छैन । केही दिनअघि राजधानीको न्यूरोडमा एउटा कपडा व्यापारी र ग्राहकबीच भएको सामान्य मोलमोलाई अचम्म लाग्दो थियो । पसलमा दशैं अफर ३० प्रतिशत छुट लेखिएको थियो । ग्राहकले एउटा पाइन्टको मूल्य सोध्यो । व्यापारीले एक हजार आठ सय बतायो । ग्राहकले पाँच सयमा दिनुस् भन्दै थियो, व्यापारी आक्रोशमा आयो । राति चोर्न आउनुस् । ग्राहक निकै संयमित हुँदै व्यापारीलाई फकाउँदै थियो । जति बेलासम्म ग्राहकले छ सय र व्यापारीले एक हजारसम्म पाइन्टको दाम निर्धारण गरिरहेका थिए । अन्त्यमा सात सयमा कुरा मिल्यो । १८ सय तोकिएको पाइन्ट एक घण्टा कचकच गरेर ग्राहकले सात सयमा किनेर गयो । यो दृश्य निकै रोचक देखिन्थ्यो । १८ सय मूल्य अंकित पाइन्ट सात सयमा बेच्दा पनि व्यापारीले आफूलाई पुग्ने फाइदा त राखेकै थिए होलान् । बार्गेनिङ गर्न नजान्ने ग्राहक थियो भने १५ सयसम्ममा त्यो पाइन्ट किनेर लैजान्थ्यो ।
यो एउटा सानो उदाहरणले देखाउँछ कि बजारमा चार्डपर्वको बहानामा कसरी सर्वसाधारण ठगिएका छन् भनेर । यस्ता पसलको अनुगमन र कारबाही कसले/कहिले गर्ने ? यसको जवाफ पनि न सरकारसँग छ न अरु कसैसँग नै । यतिबेला नागरिकहरु डेढ महिनाको मात्र सहुलियत पसल होइन, देशभरि ३६ वटा मात्र सहुलियत पसल पनि होइन । सधैंका लागि र सबैतिर सस्तो पसल चाहियो भनिरहेका छन् । के सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ ? सक्छ भने सधैंका लागि जनतालाई सेवा देओस् , यदि सक्दैन भने देखावटी सुपथ मूल्य पसल राखेर नागरिकलाई भ्रममा पार्नुको कुनै औचित्य छैन । आम नागरिकको यो आवाजलाई सरकारले सुनुवाइ गर्नु जरुरी छ । दैनिक आवश्यकताका वस्तु भनेको सधैं चाहिन्छ । सरकारको अनुगमन नियमित हुने हो भने सर्वसाधारण हरेक बहानामा ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । तर यस्तो कुराको कल्पना गर्नु अब सपना देख्नु जस्तै भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको हितका लागि सरकार, उपभोक्तावादी, व्यापारी सबैको पहलमा सधैंका लागि सहुलियत दिने पसलको आवश्यकता अति नै जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा महँगी झन बढ्दै जानेछ । यो विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न सकोस् । (आर्थिक दैनिकबाट)